Bit By Bit - imifuniselo Running - 4.5 Ukwenza oku kwenzeka
Nokuba awufuni Ndisebenza kwinkampani Tech enkulu uya kubaleka imifuniselo yesuntswana. Ungakhankanya noba kuyenza wena okanye iqabane nomntu onokukunceda (kwaye ngubani unganceda).
Ngeli xesha, ndiyathemba ukuba benehlombe ezinokwenzeka yokwenza experimenti yakho yesuntswana. Ukuba usebenza kwinkampani Tech enkulu nokuba sele ukwenza ezi mvavanyo lonke ixesha. Kodwa ke, ukuba ngaba umsebenzi kwinkampani Tech usenokucinga ukuba awukwazi ukubaleka imifuniselo yesuntswana. Ngethamsanqa, ukuba engalunganga; kunye nobuchule kancinane kwaye umsebenzi onzima, wonke umntu benze uvavanyo yedijithali.
Njengoko njengenyathelo lokuqala, oko kuluncedo ukwahlula phakathi iindlela ezimbini eziphambili: ukwenza ngokwakho okanye ibambisene enamandla. Ke, kukho nkqu isibini ngeendlela ezahlukileyo ukuba ungenza ngokwakho; uyakwazi ulingelo bume ezikhoyo, ukwakha ulingelo yakho, okanye ukwakha imveliso yakho ukulingwa ngokuphindaphindiweyo. Ndiza ukubonisa ezi ndlela ngezininzi imizekelo ngezantsi, yaye ngoxa ufunda ngabo umphawulayo njani indlela nganye inika urhwebo-offs ecaleni imilinganiso emine engundoqo: iindleko, ulawulo, njengokuba zinjalo, kwaye zokuziphatha (Figure 4.11). Akukho ndlela ubogqitha zonke iimeko.
Umfanekiso 4.11: Isishwankathelo zorhwebo-offs iindlela ezahlukeneyo ukuba unako ukwenza umfuniselo wakho kwenzeka. Xa iindleko Ndithetha malini ukuba umphandi ngokwemiqathango ixesha nemali. Xa ulawulo Ndithetha ukukwazi ukwenza into ofuna ngokwemiqathango nxaxheba kugaywa, engakhethiyo, beninikela unyango, kunye neziphumo yokulinganisa. Xa ngendlela ndiya kuthetha ubungakanani bume isigqibo elihambelana abo kwadityanwa kubomi bemihla ngemihla; uqaphele ukuba ngendlela ephezulu akusoloko kubalulekile uvavanyo neengcamango (Falk and Heckman 2009) . Zeenqobo Ndithetha amandla abaphandi kakuhle ezintle ukulawula nemingeni yokuziphatha ezinokuvela.